Ninkii uu Mareykanka tarxiilay ee Shiinaha ka caawiyay dayax-gacmeedkii ugu horreeyay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ninkii uu Mareykanka tarxiilay ee Shiinaha ka caawiyay dayax-gacmeedkii ugu horreeyay
Ninkii uu Mareykanka tarxiilay ee Shiinaha ka caawiyay dayax-gacmeedkii ugu horreeyay
Senisyahan u dhashay Shiinaha ayaa labo dal oo ka tirsan quwadaha waaweyn ee caalamka ka caawiyay in ay gaaraan dayaxa balse waxaa lagu xusuustaa sida uu u caawiyay mid ka mid ah dalalkan, sida ay ku warrameyso Kavita Puri.
Maxtaf ku yaalla magaalada Shanghai waxaa la dhigay 70,000 oo qalab ah oo lagu xusayo ninkan oo loo yaqaano “Seynisyahankii dadka” oo magaciisuna yahay Qian Xuesen.
Qian Xuesen waa aabihii soo saaray gantaallada iyo barnaamijka cirbixiyeenka Shiinaha. Cilmi baaris uu sameeyay seynisyahankaas wuxuu ka caawiyay Shiinaha in uu hawada u diro dayax-gacmeedkii ugu horreeyay, waxaana dalkaas looga arkaa “Halyeey qaran”.
Qian wuxuu ku dhashay Shiinaha sannadkii 1911-kii, waaliddintiisa waxay ahaayeen dad wax bartay, kaddib markii uu ka shaqeeyay Japan, wuxuu bilaabay hanaankii waxbarashada Shiinaha.
Qian wuxuu ahaa ardey firfircoon, wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda ku taalla Shanghai ee Jiao Tong, wuxuuna ku guuleystay deeq waxbarsho oo naadir ah si uu ugu biiro jaamacadda teknoloojiyadda ee Massachusetts ee ku taalla Mareykanka.
Sannadkii 1935-tii, Qian wuxuu gaaray gobolka Boston ee dalka Mareykanka, wuxuu la kulmay faquuq iyo isir naceyb, sida uu sheegayo Chris Jespersen, oo ah profesoor wax dhiga taarikhda oo ka howlgala jaamacadda North Georgia.
Wuxuu markii dambe u wareegay machadka teknolojiyadda California halkaas oo uu ka dhiganayay cilmiga injineernimada ee diyaaradaha. Dadkii halkaas wax ka bartay waxay ahaayeen injineero caanka ahaa dunida xilliggaas oo uu ka mid ahaa injineerkii ka soo jeeday Hungary, Theodore von Karman.
Dadkii ay hal meel ka soo shaqeeyeen Qian waxaa ka mid ahaa seynisyahan caan ah oo la oran jiray Frank Malina, kaas oo xubin muhiim ah ka ahaa koox seynisyahanno oo la oran jiray “Kooxda is miidaaminta”.
Kooxda waxay doonayeen in jaamacadda gudaheeda ay ku sameeyaan gantaal balse intii ay baarayeen kiimiko halis ah, waxaa ka khaldamay wixii ay sameynayeen, wayna ku qaraxday, inkasta uusan qof ku dhiman, sida uu sheegay Fraser Macdonald oo ah qoraa.
Maalin maalaha ka mid ah Qian wuxuu la kulmay saaxibbadii ka tirsan kooxda seynisyahada ah, waxay xilligaa ka shaqeynayeen xisaab adag si cilmi baaris loogu sameeyo marka la ganayo gantaallada.
“Xilliggaas ma jirin qof si dhab ah ama seynisyahan ku takhasusay cilmiga xisaabta oo halis u gelin karay sumcaddiisa oo yiraahda ‘kani waa mustaqbalka’, balse xaaladda waxay is bedeshay xilligii uu bilaabanayay dagaalkii labaad ee adduunka,” ayuu yiri Fraser Macdonald.
Howlihii ay wadeen kooxdii seynisyahanada ee la oran jiray Suicide Squad, wuxuu damac ka soo galay militariga Mareykanka oo bixiyay cilmi baaristii ay ku sameynayeen sidii loo soo saari lahaa gantaallada laga rido diyaaradaha dagaalka.
Maalgelintii ay militariga Mareykanka siiyeen kooxdaa, waxay suurogelisay in la sameeyo goob lagu sameeyo cilmi baarista lagu raadinayo hagaajinta gantaalka sannadkii 1943-dii, iyadoo uu hoggaaminayo seynisyahan, Theodore von Karman, Qian Xuesen iyo Frank Malina, waxayna ahaayeen dadkii udub dhexaadka u ahaa mashruuca.
Qian wuxuu u dhashay dalka Shiinaha, xilliggaas na jamhuuriyaddii Shiinaha waxay saaxib dhow la ahayd Mareykanka. “Ma jirin tuhun ku saabsan in mashruuc uu hoggaaminayo Mareykanka oo lagu sameynayo diyaaraad uu udub dhexaad u yahay seynisyahan u dhashay Shiinaha,” ayuu yiri qoraa Fraser Macdonald.
Qian waxaa la guddoonsiiyay shati uu kaga shaqeyn karo cilmi baarista dhanka hubka, xita wuxuu ka mid noqday guddiga dowladda Mareykanka kala taliyo seyniska.
Ka dib markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuu ka mid ahaa khuburradii loo diray Jarmalka, waxaana la socday seynisyahan lagu magacaabo Theodore von Karman. Wuxuu hadafkoodu ahaa inay soo wareystaan injineerada Nazi-ga oo uu ka mid ahaa Wernher von Braun oo ah ninkii hoggaaminayay gantaallada Jarmalka. XIlligaas Mareykanka wuxuu doonayay in uu ogaado cilmiga Jarmalka.
Guddoomiyihii hoggaaminayay kacdoonkii shuuciga ee Shiinaha, Mao Tse-Tung, ayaa sannadkii 1949-kii ku dhawaaqay in Mareykanka uu yahay “Sheydaan”, sida uu sheegay Chris Jespersen.
Agaasimihii cusbaa ee sheybaarka waaxda cirbixiyeennada Mareykanka ayaa rumeysanaa in qof basaas ah uu ku sugan yahay sheybaarka, wuxuuna arrintaas la wadagaay saraakiil ka tirsanayd FBI-da. “Waxaan u maleynayaa in ay ka soo jeedaan Shiinaha ama Yuhuudda,” ayuu yiri Fraser Macdonald.
Markii dambe FBI-da Mareykanka waxay Qian Xuesen iyo Frank Malina iyo dad kale ku eedeeyeen in ay ka tirsan yihiin xisbiga shuuciga ayna halis ku yihiin amniga qaranka.
Dacwadaha loo heystay Qian waxay ku saabsanaayeen dokumenti soo baxay sannadkii 1938 oo uu ku xusnaa xisbigii shuuciga ee ka jiray Mareykanka, wuxuuna muujinayay in Qian uu ka qeybgalay kulan ay FBI-da ku sheegeen inay la yeesheen xisbiga shuuciga ee Pasadena, inkasta oo Qian uu beeniyay in uu xubin ka ahaa xisbigaas.
Daraasad cusub ayaa muujineysaa in Qian iyo Frank Malina ay isku xilli ku biireen xisbigaas, sannadkii 1938.
Zuoyue Wang oo ah barofesoor Cilmiga Taariikda ka dhiga jaamacadda California ayaa sheegayaa in aanay jirin caddeymo ku saabsan in Qian uu howlo basaasnimo waday markii uu ku sugnaa Mareykanka.
Waxaa laga la noqday shatigii uu kaga shaqeyn jiray sheybaarka, waxaana la geliyay xabsi guri balse saaxibkiisa, Theodore von Karman, ayaa dawladda u sheegay in Qian uusan wax dambi ah gelin, guulna kama uusan gaarin arrintaas.
Sannadkii 1955-tii, markii Qian uu shan sano xabsi guri ku qaatay, madaxweynihii Mareykanka xilliggaas, Eisenhower, wuxuu go’aansaday in Qian loo tarxiilo Shiinaha. Seynisyahankaas wuxuu Mareykanka kaga soo tagay xaaskiisa iyo labo canug oo uu dhalay.
“Wuxuu ka mid ahaa seynisyahannadii ugu caansanaa Mareykanka, wuxuuna u horseeday guulo, balse lama uusan kulmin oo kaliya ah dhibaato ee waa la khiyaanay sidoo kale,” ayuu yiri, Tianyu Fang oo ah qoraa ahna weriye.
Qian waxaa lagu soo dhaweeyay Shiinaha, waxaan loo aqoonsaday halyeey, laakiin markiiba kuma uusan biirin xisbiga shuuciga ee Shiinaha. Sannadkii 1958-dii oo uu ku biiray xisbiga shuuciga, wuxuu markasta u jaanjeeray dhinaca garabka midig, wuxuuna ka badbaaday kacdoonkii dhanka dhaqanka iyo in laga saaro xisbiga.
Markii uu Shiinaha yimid wax badan lagama fahansaneyn cilmiga ku saabsan dayax gacmeedka, wuxuuna 15 sano kaddib noqday kormeerihii dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee Shiinaha uu hawada u diro.
Tobonnaan sano ka dib wuxuu tababaray seynisyahanno badan, shaqadiisana waxay suurogelisay in dadka u dhashay Shinaha ay raacaan dayax gacmeedka.
Gantaalladii sameyntooda uu Qian ka caawiyay Shiinaha waxay suurogeliyeen in lagu weeraro Mareykanka.
Gantaalkii la oran jiray Qian’s silkworm, waxaa lagu weeraray Mareykanka sannadkii 1991-dii xilligi uu socday dagaalkii Khaliijka, sida uu sheegay Fraser Macdonald.
Dan Kimball oo ahaan jiray madaxii ciidamada badda ee Mareykanka markii dambena noqday madaxa hay’ad qaabilsan dayax-gacmeedka, ayaa yiri: “Tallaabada ugu xumeyd ee dalkan uu qaaday waxay aheyd xaaladdii Qian.”
Maanta uu Mareykanka iyo Shiinaha ka dhex taagan yahay dagaal ganacsi, waxaysan dad badan oo u dhashay Mareykanka ogeyn kaalintii Qian uu ku lahaa mashruucii dayax-gacmeedka Mareykanka.
Tianyu Fang wuxuu leeyahay in ardey badan oo u dhashay Shiinaha kuna sugan Mareykanka aanay ogeyn sababta Qian uu uga soo tegay Mareykanka. “Xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa sii xumaanaya, waxaa laga yaaba in laga shakiyo sidii dhacday xilligii Qian,” ayuu yiri Fang.
Qoraa Fraser Macdonald wuxuu rumeysan yahay in arrintaas ay digiin u ahayd tarxiilkii aqoon yahan: “Sheekoyiinka ku saabsan seyniska Mareykanka waxaa sare u qaaday dad ka soo jeeda dibadda, balse xiligan lagu jiro waxaa adag in arrintaas loo dabaal dego”.
Dadaalkii Qian wuxuu u horseeday Shiinaha in uu noqday dal awood leh, marka ay timaaddo sahanka lagu tagayo hawada sare.
Sannadkii la soo dhaafay markii Shiinaha uu dayax-gacmeed ka dejiyay cirifka fog ee dayaxa, waxaana sahankaas sameeyay seynisyahan la yiraahdo Von Karman crater, kaas oo uu la taliye u ahaa Qian, si kastaba, dhaqdhaqaaqi ka socday Mareykanka ee ka dhankaa Shuuciga wuxuu Shiinaha u horseeday in guul uu ka gaaro sahanka dayaxa.
Previous articleDowladda Belgium-ka oo ku dhawaaqday in dalkaasi markale lagaliyay xaalad bandow ah si looga hortago faafida xanuunka Covid-19
Next articleMadaxweynaha Somalia oo ka hadlay dhul-gariirkii ku dhuftay Turkiga
Al Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qarax ka dhacay meel ku dhow garoonka
W/Q: Bashiir Maxmud oo kamid ah dadkii ka bad baaday qaraxii ka dhacay Gelato Davino.
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo ka tacsiiyeey Qaraxii Caawa ee Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah oo ka kasoo baxaya qarax ismiidaamin ka dhaxay Muqdisho
Madaxweynaha Dalka Suuriya Bishaar Al Asad oo qarka u saaran in la sootaago maxakamada Dembiyada Aduunka
Madixii Cilmibaarista Nugleyrka Iraan oo goor dhaw lagu diley gudaha Dalka iran.
Beesha Habar gidir oo ku kala qeybsamay in Musharax Madaxweyne ka...
Kulan maal mahaan magaalada Muqdisho Beesha Habar gidir ugu socday oo looga doodaayey in Musharax madaxweyne ka dhigtaam Madaxweyne Farmaajo madaama uu balan Qaaday...
Dhaartii Baarlamaanka Hirshabeele oo ka dhacday Saakay Kana siib kana Saar
Suudan oo Xiirtay Xadka ay la wadaagto Itoobiya kadib dagaalkii shalay
Wararkii ugu danbeeyey ee Dagaalada Etoobiya ka socday halkee ayeey kala...
axmed cali - November 5, 2020 0